भुवन केसीलाई ‘जुत्ताको माला र कालो मोसो लगाएर हनुमानढोका घुमाउनुपर्छ’ भन्ने यी युवती को हुन् ? - Sidha News
काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल हुँदै चलेको अभिनेता भुवन केसी र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको वि’वाद अहिले अदालतमा पुगेको छ । भुवनले आफ्नो च’रित्र ह त्या गरेको भन्दै साम्राज्ञी विरुद्ध १० करोड रुपैया क्षतीपुर्ती माग गर्दै अदालतमा मु द्धा दिएका छन् । साम्राज्ञीले भुवनलाई दुब्र्’यवहार गरेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा लगाएकी थिइन् । यि दुईको विवादलाई लिएर कलाकारहरु पनि दुई भागमा बाँडिएका छन् । कतिले भुवनको साथ दिएका छन् भने कतिले साम्राज्ञीलाई साथ दिएका छन्।
यस्तैमा एक नायीकाले साम्राज्ञीलाई साथ दिदै निकै उत्ते’जक अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले भुवन केसीलाई जुत्ताको माला लगाएर शहर घुमाउनु पर्ने भन्दै अभिब्यक्ति दिएकी छन् । भुवनले अदालतमा साम्राज्ञी वि’रुद्ध दिएको मु द्दाका विषयमा समाचार बाहिरिए पछि उनले त्यसमा प्रतिकृया दिँदै उग्र अभिब्यक्ति दिएकी छन् । नायिका दिपशिखा खड्काले साम्राज्ञीको पक्षमा बोल्दै भुवनलाई काली मोसो दलेर जुत्ताको माला लाउनु पर्ने भन्दै आ’क्रोश व्यक्त गरेकी हुन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा एक स्टाटस लेख्दै भनेकी छन्:
“भुवन काकालाई १० करोडको क्षतिपूर्ति दिनु पर्‍यो अरे तेस्का बाजे १० वटा जुत्ताको माला लगाएर हनुमानढोका घुमाउनु पर्छ । त्यो पनि कालो मसो दलेर ।’उनी थप्छिन् ‘कहिले ब्यक्तिगत कुरा निकाल्ने, कहिले घराएसी कुरा निकाल्ने, अनि अब १० करोडको माग रु यो बोका नै हो । मलाई पनि राम्रो सग थाहा छ बोल्न परेको दिन बाउको बिहे देखाइ दिन्छु ।’उनले आफु पनि हिं’सामा परेको र त्यतीनै बेला प्रतिकृया जनाएको पनि उल्लेख गरेकी छन्।”
फोटोमा अलिकति क्लिभेज देखिएपछि गिद्धेआँखा
फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउने?
नायिका स्वेता खड्काको लक्ष्मी पूजा
नेपालगञ्जमा २९ लाख सहित १० जना प’क्राउ : हारेपछि पत्निलाई नै दाउमा राखे